नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआरको काम तत्काल सम्पन्न गर्न ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन - Arthasansar
शनिबार, ०६ मंसिर २०७७, १९ : १० मा प्रकाशित
अर्थ संसार, काठमाडौं -ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नगलाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) को काम तत्काल सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ । जाजरकोटमा आयोजनास्थल रहेको कूल ४१७ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त सो आयोजनाको डिपिआरको तयारीमा नै लामो समय लागेको गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो ।
नलगाड आयोजना क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलन कायम गर्न तथा कर्णालीको विकासमा कोसेढुङ्गा हुने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । मन्त्री पुनले आयोजना निर्माणका लागि वैदेशिक लगानी जुटाउन सरकार प्रयासरत रहेको जानकारी पनि दिनुभयो । जापानी सहयोग नियोग ९जाइका० ले नलगाडमा लगानीको इच्छा देखाएको भन्दै उहाँले विभिन्न चरणमा मन्त्रालय र जाइकाबीच लगानीबारे संवाद भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सानिमा माई हाइड्रोपावरको नाफा बढ्दा विद्युत बिक्री आम्दानी घट्यो, ईपिएस कति ?
बुटवल पावरको नाफासँगै अघिकांश सूचकमा गिरावट, प्रतिसेयर आम्दानी कति ?
अप्पर तामाकोशी हाइड्रोपावर साढे ३ करोड नोक्सानीमा, ईपिएस कति ?
एचआइडीसीएलको नाफामा २०.९४ प्रतिशतले गिरावट, अन्य सूचक कस्ता छन् ?